Global Voices teny Malagasy » Tonga soa ny GVO dika teny Alemana, Albaniana ary Masedoniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Tonga soa ny GVO dika teny Alemana, Albaniana ary Masedoniana
Voadika ny 18 Marsa 2008 16:54 GMT 1	 · Mpanoratra Portnoy Zheng Nandika Andriamifidisoa Zo
Faly dia faly ny Global Voices Lingua milaza aminareo anio fa misokatra amin'ny fomba ofisialy anio ny teny Alemana , Albaniana  ary Masedoniana . Pejy vaovao indray no misokatra anio.
Nahavory vondron'olona tonian-dahatsoratra sy mpanolotena handika teny maro mazoto sy mavitrika tokoa izahay hatramin'ny nanombohan'ity Lingua na teny maro ity, Ren'ny vahoaka maro kokoa avy amin'ny vazantany efatra sy amin'ny fiteniny ny Global Voices noho ny ezaka tsy voasanda nataon'izy ireo. Maneho ny dindon'ny fahamaroam-pitenenana isankarazany eto amin'ny World Wide Web tokoa ny Lingua amin'izao.
Nandany ron-doha (ny fotoany sy ny fahaizany) tokoa ireo mpandika teny ireo (fa tsy fitaovana mpandika teny tsy akory no ampiasaina!) hahatontosa ny kinendrin'ny Global Voices – amin'ny “hitondrana hazavana any amin'ny toerana sy vahoaka hafa izay adinon'ny haino aman-jery matetika.” Anisan'ny nanampy isa ny mpanaraka (na mpitsidika) ny Global Voices tokoa ny ezaka goavana tamin'ny fandikateny nataon'izy ireo.
Ankehitriny moa dia efa voadika amin'ny teny 12 ny Global Voices (Lingua). Tsy ampy tokoa izany mazava loatra! Mbola maro ny teny hafa tsy mbola tafiditra ao amin'ny Lingua aloha, saingy efa mizotra ho amin'izany isika ankehitriny. Ho avy koa ny amin'ny fiteny hafa. Avia miaraka aminay!Raha toa ka liana ihany koa ianao amin'ny fampiroboroboana, dia miangavy anao izahay hitsidika ny Takelaky ny Lingua  ho amin'ny fanazavana bebe kokoa sy hahitanao ny adiresim-pifandraisana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/03/18/681/
 Takelaky ny Lingua: https://www.globalvoicesonline.org/lingua